EFCC kwuru na ha ga-amachi ike ego na ndọrọndọrọ ọchịchị - BBC News Ìgbò
EFCC kwuru na ha ga-amachi ike ego na ndọrọndọrọ ọchịchị
4 Maachị 2018
Nkenke aha onyonyo EFCC si na ha ga-agbachi ebe obụla na-ehi ehi.
Ka a na-ahazi ntuliaka nke aga eji họpụta ndị ga-achi obodo dị icheiche na Nigeria n'afọ 2019, otu na-ahụ maka mpụ na nrụrụaka bụ EFCC sịrị na ha ga-etinye anya ha nnukwu ego ndị otu ndọrọndọrọ na-ekegharị iji zụta mbinyeaka .
Onye kwuru nke a bụ onyeisi ndị EFCC bụ Maazi Ibrahim Magu.
Magu gbara ama a mgbe ọ nọ n'emume a na-akpọ "Question Time" na Channels Televion ụnyaahụ.
Magụ sịrị, "Anyị na INEC na-arụkọ ọrụ ịhụ na anyị gbachiri mpio niile n'ebe niile ihe si ehi tupu eme ntuliaka nke 2019. Anyị ga-agbachi ebe ọ bụla ndị mmadụ si ebugharị ego, ma ọ bụ n'ọbaego, ma ọ bụ n'ihie."
"Anyị ga-egbochi ndị mmadụ iji ego zụọ mbinyeaka, ma ọ bụ iji ego zụta ndị a na-akpọ 'delegates' n'asụsụ bekee ma a na-eme mbinye aka eji ahọpụta ndi ga-anọchite anya ndị pati na ndọrọndọrọ ọchịchị. Anyị ahazịela ihe anyi ga eji me ihe a," Magu kwuru.
Ụlọ ntaakụkọ Punch kwuru na onye ode akwụkwọ n'otu pati PDP bụ Kola Ologbondiyan gwara ha na EFCC enweghi ikike itinye anya n'ihe gbasara ego ndọrọndọrọ. O kwuru na ọ bụ INEC nwere ụdị ikike a.
Mana, Punch dekwara na onye ode akwụkwọ mgbasa ozi nke APC bụ Mallam Bolaji Abdullahi gwara ha na pati ya na-abatara ihe EFCC kwuru na ha ga-eme.
Naịjirịa ga-eme ntuliaka a ga-eji họpụta onye ga-abụ onyeisiala, ndị gọvanọ na ndị ọchịchị ndị ọzọ n'afọ 2019.
Onyeisiala bụ Muhammadu Buhari ekwubeghị ma ọ ga-azọ ọchịchị ọzọ, mana a na-ele anya na ọ ga achọ ka ọchịa afo anọ ọzọ.
Gọọmenti Naịjirịa ezipụla ụgbọelu ịchọ ụmụ Dapchi
Otu nwoke egbuola ụmụaka ya n'Awada
Kontena adapiala ụgbọala na 'Tradefair' n'ụzọ Badagry na Legọọsi
Ụmụafọ Nigeria 5 merụrụ ahụ na nsogbu dara n'etiti Naijiria na ndị Togo
Nri ndị na-arịa 'Sickle cell' kwesiri ị na-eri